FANADINANA BAKALOREA : Hanomboka ny alarobia ny fitsarana ny taratasy ao Mahajanga
Raha mbola tena eo am-pikatrohana tanteraka ireo mpianatra miatrika ny fanadinana bakalorea teknika dia hiroso amin’ny fitsarana ireo taratasim-panadinana kosa ny tompon’andraikitra amin’ izany. 26 septembre 2018
Tapaka àry fa ny alarobia maraina izao no hanomboka io fitsarana io eny amin’ny foibem-panadinana lisea Philibert Tsiranana. Ho fanombohana izany àry dia nisy ny fampihaonana ireo mpampianatra amin’ny kilasy famaranana izay efa nantsoina manokana hitsara ity fanadinana ity. Ny avy eo amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mihitsy no nandefa solontena niaraka taminin’ny oniversite eto Mahajanga niaraka nandray sy namory ireo mpampianatra ireo.
Nandritra ity fihaonana ity no nilazana tamin’ireo mpampianatra ho mpitsara ireo ny fepetra rehetra tokony harahina mandritra ny fitsarana ny taratasim-panadinana rehetra. Nambara fa ireo fepetra ireo dia efa tapaka avy teo anivon’ny minisitera isaky ny taranja rehetra, noho izany raha misy amin’ireo mpampianatra no tsy dia mahazo loatra ny fizotr’izany mandritra ny fitsarana dia mbola afaka manontany hatrany ny tompon’andraikitra izay tsy miala eny amin’ny foibem-panadinana mandritra ny tontolo andro.
Marihina fa efa tonga ao amin’ny foibem-panadinana avokoa ireo taratasim-panadinana rehetra avy any amin’ireo faritra sy foibem-panadinana ivelan’i Mahajanga renivohitra. Azo antoka araka izany fa tsy ho tara raha oharina amin’ireo tanàna hafa ny voka-panadinana bakalorea ato anatin’ny faritanin’i Mahajanga.